यस्तो विपदको बेला कसैले भ्रष्टाचार गरे सहैय हुँदैन : प्रधानमन्त्री ओली
Wednesday, 10 Jun, 2020 12:57 PM
प्रधानमन्त्रीले स्थानीय तहहरूको काम गराइको प्रशंसा गर्नुभयो । भन्नुभयो, एउटा नाकामा १० हजार थपिनुभएको छ । खाने कहाँ ? राख्ने कसरी ? घर पठायो भने समुदाय सोत्तर होला भन्ने समस्या । स्थानीय तहले कसरी काम गर्नुभएको होला ? उहाँहरू त फिल्डमा खतरासँग लडेर काम गर्नुभएको छ । उहाँले यस्तो विपदको बेला कसैले भ्रष्टाचार गरे सह्य नहुने बताउनुभयो ।